दैनिक चेलीबेटीमाथि बलात्कार, यही हो मानवअधिकार ! - NepalDut NepalDut
दैनिक चेलीबेटीमाथि बलात्कार, यही हो मानवअधिकार !
- मानव अधिकारवादी डलरमा बिकेको आरोप(भिडियोसहित)
आज विश्व मानव अधिकारकार दिवस । यो दिवस मनाइरहदा देशैभर दिवसको भन्दा महिला हिंसा अन्त्य र बलात्कारीलाई सजायको माग चर्काे छ ।
पोखरामा पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनामा सोमबार यो दिवस मनाइएको छ । मानवअधिकार चोकबाट चिप्लेढुंगा हुँदै सभागृहचोकमा प्रभातफेरि ¥याली पुग्दा निर्मलाका निम्ति न्याय अभियानले प्ले कार्ड प्रदर्शन ग¥यो ।
दिवसकालाई दिवसकै रुपमा सिमित गरी मानवअधिकारको पक्षमा संघ, संस्थाले आवाज नउठाएको उनीहरुको गुनासो छ । करिब १ दर्जन युवाले धेरै मानवअधिकारवादी अधिकार हनन विरुद्ध बोल्न नडराएको र सरकारको संरक्षणमा लागेको आरोप लगाए । उनीहरुले मानवअधिकारवादीलाई डलरमा बिकेको आरोप समेत लगाए ।
निर्मलाका निम्ति न्याय अभियानका युवाले दैनिक चेलीबेटीमाथि बलात्कार, यही हो मानवअधिकार, मानवअधिकार डलबमा कारोबार, बलात्कारका घटनामा छैन सरोकार, मानवअधिकार दिवस दिवसमा सिमित भो, हाम्रो मानवअधिकार खै कहाँ गो, उपलब्धि के १६ दिने अभियान, बलात्कारीले लिए निर्मलाको ज्यान जस्ता प्लेकार्ड बोकेका थिए ।
युवाहरु प्लेकार्ड बोकेर मुख्य ¥यालीकै अघि उपस्थिति भएपछि डिएसपीद्वय नवीन कार्की र रवीन्द्र गुरुङ टोलीसहित फिल्डमा खटिएका थिए । प्लेकार्ड प्रदर्शनसँगै विश्वराज पौडेलले निर्मलाका हत्यारालाई कविताबाटै कारवाही माग गरे ।
आयोगले आयोजना गरेको औपचारिक समारोहमा गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमान र सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन सहभागी थिए ।